Shirkii Qiimaynta Waxqabadka 11ka Bilood ee Maamulada Gobolada,Degmooyinka iyo 4ta maamul magaalooyinka oo galay maalintii 2aad. - Cakaara News
Jigjiga(cakaaraNews) Talaado June 18,2013.Waxaa galay maalintii 2aad Shirkii Qiimaynta Waxqabadka 11ka bilood ee sanadmiisaaniyadeedka 2005T.I ee ay bil kaliya ka hadhsan tahay laguna Qiimaynayo Maamulada 9ka Gobol,Maamulada 68da Degmo iyo Mayorada 4ta ismaamul Magaalo ee DDSI.
Qiimayntan oo shalay bilaabmatay ayaa Diirada lagu saarayaa Qiimaynta Warbixinta Waxqabadka Maamulada kor ku xusan ay ka keeneen Natiijo waxqabad la taaban karo Hirgalinta Qorshayaashii Horumarineed ee u yaalay Sanad-miisaaniyadeedka Dabayaaqada ah ee 2005,T.I islamarkaana halbeega lagu miisaamayaa yahay Audio-Visual-Tangible(I Tus oo I Taabsii).
Hadaba Maanta ayaa ay Gudoomiyayaasha Gobolada Deegaanku ay ka akhriyeen Fagaaraha shirku ka socdo warbixinta Waxqabadkooda Guud ahaan Degmooyinka hoos yimaada Maamulka Gobolka soona koobaysay Warbixintooda Gobol- ahaaneed.
Dhagaysiga warbixinta waxqabadka ee uu soo Gudbiyo Gudoomiye Gobol oo kasta ayaa ka waydiinayeen Su’aalo Madaxda Shirka hagaysa,Gudiyada Kormeerka iyo Dabagalka,Maamulada Gobolada iyo Degamooyinka kale meeshuu jawaab cad ka bixin waayana loo calaamadaynayay.
Maamuladan Shirka Qiimayntu u socoto ayaa loo kala qaybiyay Koox koox iyadoo looga fadhiyo soo diyaarinta diyaarinta qorshaha waxqabadka sanadka 2006,talobixin,Caqabadaha iyo Qorshayaal kale.